Hetra Vaping Wholesale any Etazonia sy Manodidina ny ozinina sy ny mpanamboatra | SMOORE
Rehefa mitombo ny lazan'ny vaping, dia lasa tanjona voajanahary ho an'ny governemanta mila fidiram-bola. Satria ny vokatra etona dia vidin'ny mpifoka sy mpifoka taloha matetika, dia heverin'ny tompon'andraikitra amin'ny hetra fa ny vola laniana amin'ny sigara e dia vola tsy laniana amin'ny mpamokatra paraky nentim-paharazana. Ny governemanta dia miankina amin'ny sigara sy vokatra paraky hafa ho fidiram-bola efa am-polony taona maro.
Na ny fitaovana vaventy na e-ranon-javatra mendrika hetra tahaka ny paraky dia efa akaiky an'io. Hitan'ny governemanta fa manosika ny mpifoka hiala amin'ny sigara izy ireo ary takatr'izy ireo fa ny vola azo dia tsy maintsy averina. Satria ny sigara dia toa fifohana sigara, ary misy fanoherana lehibe ny fahasalamam-bahoaka amin'ny vaping, lasa tanjona mahaliana ho an'ny mpanao politika izy io, indrindra satria afaka manamarina ny hetra izy ireo amin'ny karazana fitakiana fahasalamana isan-karazany.
Ny hetra momba ny vape izao dia aroso ary ampandalovina matetika any Etazonia sy amin'ny toeran-kafa. Matetika ny hetra dia toherin'ny mpisolovava amin'ny fampihenana ny paraky sy ny solontenan'ny vondrona mpivarotra indostrialy ary ny mpanjifa miovaova, ary matetika izy ireo dia tohanan'ny fikambanana mifehy ny paraky toy ny fikambanan'ny havokavoka sy ny fo.
Fa maninona ny governemanta no manome hetra ny vokatra vaping?
Ny hetra amin'ny vokatra manokana - izay antsoina matetika hoe hetra - dia ampiharina amin'ny antony maro samihafa: manangona vola ho an'ny tompon'andraikitra amin'ny hetra, manova ny fitondran-tenan'ireo hetra, ary manonitra ny vidin'ny tontolo iainana, fitsaboana ary fotodrafitrasa namboarina tamin'ny fampiasana ny vokatra. Ohatra amin'izany ny fandoavan-ketra amin'ny alikaola hanakanana ny fisotroana tafahoatra, ary fandoavana hetra amin'ny lasantsy handoavana ny fikojakojana ny lalana.
Ny vokatra sigara dia lasibatra hatry ny ela amin'ny hetra. Satria manimba ny fiarahamonina iray manontolo (fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny mpifoka) ny voka-dratsin'ny fifohana sigara, dia nilaza ny mpiaro ny hetra paraky fa tokony hampandoa io volavolan-dalàna io ny mpanjifa paraky. Indraindray ny hetra haba amin'ny alikaola na paraky dia antsoina hoe hetra mpanota, satria manasazy ny fihetsiky ny mpisotro sy mpifoka ihany koa izy ireo ary amin'ny teôlôjia dia manampy amin'ny fandresen-dahatra ny mpanota hiala amin'ny fomba ratsy fanaony.
Saingy satria miankina amin'ny vola miditra ny governemanta, raha mihena ny fifohana sigara dia misy ny tsy fahampiana ara-bola tokony halamina amin'ny loharanom-bola hafa, raha tsy izany dia tokony hampihena ny fandaniana ny governemanta. Ho an'ny ankamaroan'ny governemanta, loharanom-bola lehibe ny hetra sigara, ary ampangaina ny haba ho enti-miampy ny hetra mahazatra amin'ny varotra tombana amin'ny vokatra rehetra amidy.
Raha mifaninana amin'ny sigara ny vokatra vaovao, maro ny mpanao lalàna no maniry ny handoa hetra ny vokatra vaovao mba hanefana ny vola miditra very. Ahoana anefa raha ny vokatra vaovao (ndao hatao hoe e-sigara) dia mety hampihena ny fahasimbana ateraky ny fifohana sigara sy ny vidin'ny fahasalamana mifandraika amin'izany? Izay mamela ny mpanao lalàna ao anaty korontana - farafaharatsiny ireo izay manelingelina ny fandalinana azy mihitsy.
Matetika ny mpanao lalàna dia rovitra eo anelanelan'ny fanohanana ny orinasa eo an-toerana toy ny fivarotana vape (izay tsy mila haba) sy ny lobbyista mahafinaritra ho an'ny vondrona hajaina toa ny American Cancer Society sy ny American Lung Association (izay manohana hatrany ny hetra amin'ny vokatra etona). Indraindray ny antony manapa-kevitra dia ny fampahalalana diso momba ireo heverina fa manimba ny vaping. Indraindray dia tena mila vola fotsiny ry zareo.
Ahoana no fiasan'ny hetra vape? Mitovy ve izy ireo na aiza na aiza?
Ny ankamaroan'ny mpanjifa amerikana dia mandoa hetra amin'ny varotra amin'ny vokatra vaping novidiny, ka ny fanjakana (ary indraindray ny eo an-toerana) dia efa mahazo tombony amin'ny varotra vape na dia mbola tsy nasiana hetra aza. Matetika ny hetra amin'ny varotra dia tombanana ho isan-jaton'ny vidin'ny fivarotana ny vokatra novidina. Any amin'ny firenena maro hafa, ny mpanjifa dia mandoa "hetra ampiana lanja" (VAT) izay miasa mitovy amin'ny hetra amin'ny varotra. Raha ny momba ny hetra dia mivoaka amin'ny karazana fototra roa izy ireo:
Hetra fivarotana amin'ny e-ranon-javatra - Ity ranona misy nikôtinina (raha izany dia hetra nikôtinina), na amin'ny e-ranoka rehetra. Satria matetika no tombanana isaky ny milliliter, io karazana hetra ranom-boankazo io dia misy fiantraikany amin'ny mpivarotra e-ranon-tavoahangy mihoatra ny ataon'ireo mpivarotra entana vita vita misy e-ranon-javatra kely (toy ny vape pod sy cigalikes). Ohatra, ny mpividy JUUL dia tsy handoa afa-tsy ny hetra 0,7 mL isaky ny pod (na 3 mL isaky ny fonosana poleta). Satria ny vaping indostrian'ny paraky dia fitaovana kely miorina amin'ny pod na cigalikes avokoa, ny lobbyista paraky matetika dia manery hetra isaky ny mililiter
Hetra ambongadiny - Ity karazana hetra sigara e-sigara ity dia heverina fa aloan'ny mpivarotra ambongadiny (mpaninjara) na ny mpivarotra antsinjarany ho an'ny fanjakana, saingy ampitaina amin'ny mpanjifa hatrany ny vidiny amin'ny endrika vidiny avo kokoa. Ity karazan-ketra ity dia tombana amin'ny vidin'ny vokatra takiana amin'ny mpivarotra rehefa mividy amin'ny mpamongady. Matetika ny fanjakana dia manasokajy ny vapes ho vokatra sigara (na "vokatra paraky hafa", izay misy ihany koa ny paraky tsy misy setroka) mba hanombanana ny hetra. Ny hetra ambongadiny dia azo tombana ihany amin'ny vokatra misy nikôtinina, na mety mihatra amin'ny e-ranon-javatra rehetra, na ny vokatra rehetra ao anatin'izany ny fitaovana tsy misy e-ranoka. Ohatra amin'izany ny California sy Pennsylvania. Ny haba any California vape dia hetra ambongadiny izay apetraky ny fanjakana isan-taona ary mitovy amin'ny taha mitambatra amin'ny hetra rehetra amin'ny sigara. Mihatra amin'ny vokatra misy nikôtinina fotsiny izy io. Ny hetra Pennsylvania vape dia napetraka tany am-boalohany ho an'ny vokatra rehetra, ao anatin'izany ny fitaovana ary koa ny kojakoja izay tsy misy e-ranoka na nikôtinina, saingy namoaka didim-pitsarana tamin'ny taona 2018 fa tsy azon'ny fanjakana angonina ny haba amin'ny fitaovana tsy misy nikôtinina.
Indraindray ireo hetra haba ireo dia miaraka amin'ny "hetra arofanina", izay ahafahan'ny fanjakana manangona hetra amin'ny vokatra rehetra ananan'ny magazay na mpivarotra ambongadiny amin'ny andro nanombohan'ny hetra. Matetika, ny mpivarotra dia manao lisitra amin'io andro io ary manoratra fanamarinana amin'ny fanjakana ny vola feno. Raha toa ny magazay any Pennsylvania manana fananana $ 50.000 eo am-pelatanany, dia tompon'andraikitra amin'ny fandoavana $ 20,000 eo ho eo amin'ny fanjakana ny tompony. Ho an'ireo orinasa madinidinika tsy misy vola be eny am-pelatanana, ny haba amin'ny tany aza mety hampidi-doza. Ny hetra PA vape dia nanosika fivarotana vape mihoatra ny 100 tamin'ny orin'asa voalohany.
Vaping hetra any Etazonia
Tsy misy hetra federaly amin'ny vokatra vaping. Ny volavolan-dalàna dia natolotra tao amin'ny kaongresy ny vapes haba, saingy tsy mbola nisy ny nandatsa-bato na ny Antenimiera manontolo na ny Antenimieran-doholona.
Ny fanjakana amerikana, ny faritany ary ny hetra eo an-toerana
Talohan'ny taona 2019, fanjakana sivy sy ny Distrikan'i Columbia no nandoa hetra ny vokatra vaping. Io isa io dia nihoatra ny avo roa heny tao anatin'ny fito volana voalohany tamin'ny 2019, raha ny fikorontanan-tsaina noho ny JUUL sy ny taolan'ny tanora izay nanjary lohateny lehibe saika isan'andro nandritra ny herintaona mahery dia nanosika ireo mpanao lalàna hanao zavatra mba “hampitsaharana ny valanaretina.”
Amin'izao fotoana izao, ny antsasaky ny fanjakana amerikana dia misy karazana hetra amin'ny vaping statewide. Ankoatr'izay, ny tanàna sy ny faritany any amin'ny fanjakana sasany dia samy manana ny hetran'ny vape, toy ny Distrikan'i Columbia sy Puerto Rico.
Na dia tsy manana hetra ara-panjakana aza i Alaska, ny faritany monisipaly sasany dia manana hetra aloany:
Juneau Borough, NW Artct Borough ary Petersburg dia manana hetra ambongadiny 45% amin'ny vokatra misy nikôtinina
Matanuska-Susitna Borough dia manana hetra ambongadiny 55%
Ny hetra any California amin'ny "vokatra paraky hafa" dia apetraky ny State of Equalization isan-taona. Ahitana taratra ny isan-jaton'ny hetra rehetra amin'ny soka sigara. Tany am-boalohany dia nahatratra 27% ny vidin'ny ambongadiny, saingy taorian'ny nanondranan'ny Proposition 56 ny haba amin'ny sigara hatramin'ny $ 0,87 ka hatramin'ny $ 2,87 ny fonosana iray dia nitombo be ny hetra vape. Ho an'ny taona manomboka ny 1 Jolay 2020, ny hetra dia 56,93% amin'ny vidin'ny ambongadiny ho an'ny vokatra misy nikôtinina rehetra
Ny fanjakana dia manana hetra roa ambaratonga, manombana $ 0,40 isaky ny milliliter amin'ny e-ranon-javatra amin'ny vokatra rafitra mihidy (pods, cartridges, cigalikes), ary ambongadiny 10% amin'ny vokatra open-system, ao anatin'izany ny e-fluid sy tavoahangy anaty tavoahangy.
0,05 $ isaky ny hetra milliliter amin'ny e-ranon-javatra misy nikôtinina
Ny renivohitry ny firenena dia manasokajy ny vapes ho toy ny “vokatra paraky hafa”, ary manombana haba amin'ny vidin'ny ambongadiny mifototra amin'ny taham-pahafatin'ny vidin'ny sigara. Ho an'ny taom-piasana ankehitriny, mifarana amin'ny volana septambra 2020, ny haba dia napetraka amin'ny 91% amin'ny vidin'ny ambongadiny ho an'ny fitaovana sy e-ranon-javatra misy nikôtinina
$ 0,05 isaky ny milliliter hetra amin'ny e-ranon-javatra amin'ny vokatra nikatona (pods, cartridges, cigalikes), ary hetra ambongadiny 7% amin'ny fitaovana open-system sy e-fluid vita amin'ny tavoahangy dia mihatra amin'ny 1 Janoary 2021
Haba hetra ambongadiny 15% amin'ny vokatra vaping rehetra. Ankoatry ny hetra manerana ny fanjakana dia samy manana ny hetran'ny vape avy aminy ny Cook County sy ny tanànan'i Chicago (izay any Cook County):
Manombatombana hetra $ 0,80 isaky ny tavoahangy tavoahangy amin'ny tsiranoka misy nikôtinina i Chicago ary koa $ 0,55 isaky ny mililiter. (Tsy maintsy mandoa ny $ 0,20 isaky ny mL hetra Cook County ny vapers Chicago.) Noho ny hetra be dia be, fivarotana vape maro any Chicago no mivarotra e-ranon-drô nikôtinina sy tifitra nikôtinina DIY mba hisorohana ny hetra avo l-per mL amin'ny lehibe kokoa tavoahangy
Cook County hetra vokatra misy nikôtin amin'ny $ 0,20 isaky ny milliliter
0,05 $ isaky ny hetra milliliter amin'ny e-ranon rehetra, misy na tsy misy nikôtinina
Hetra ambongadiny 15% amin'ny fitaovana e-ranon-javatra sy rafitra misokatra amin'ny tavoahangy, ary hetra $ 1.50 isaky ny singa amin'ny paompy sy cartridges prefilled
Haba hetra 43% amin'ny vokatra vaping rehetra
Tsy misy hetra vape an'ny fanjakana manerana an'i Maryland, fa ny distrika iray kosa dia manana haba:
Montgomery County dia mametraka hetra ambongadiny 30% amin'ny vokatra vaping rehetra, ao anatin'izany ny fitaovana amidy tsy misy rano
Haba hetra 75% amin'ny vokatra vaping rehetra. Ny lalàna dia mitaky ny mpanjifa hamoaka porofo fa ny vokatra vokariny dia nampandoavan-ketra, na iharan'ny fanararaotana sy onitra 5 000 $ ho an'ny fandikan-dalàna voalohany, ary $ 25,000 ho an'ny fandikan-dalàna fanampiny
Tamin'ny 2011 Minnesota no fanjakana voalohany nametraka hetra tamin'ny sigara e-sigara. Ny hetra dia 70% tamin'ny vidin'ny ambongadiny, saingy nisondrotra tamin'ny 2013 ho 95% ny ambongadiny amin'ny vokatra rehetra misy nikôtinina. Ny cigalikes sy ny pod vapes — ary na ny kitapo fanombohana izay misy tavoahangin-tsiranoka iray-dia hetra amin'ny 95% amin'ny sandan'ny ambongadiny iray manontolo, fa amin'ny e-ranon-tsigara dia ny nikotinina ihany no hetra
30% hetra ambongadiny amin'ny vokatra etona rehetra
Hetra ambongadiny 8% amin'ny vokatra vaping amin'ny rafitra misokatra, ary $ 0,30 isaky ny milliliter amin'ny vokatra rafitra mihidy (pods, cartridges, cigalikes)
Ny hetra any New Jersey dia mitentina $ 0,10 isaky ny milliliter amin'ny vokatra miorina amin'ny pod sy cartridge, 10% amin'ny vidin'ny antsinjarany ho an'ny e-ranon-tsigara, ary ambongadiny 30% ho an'ny fitaovana. Ny mpanao lalàna New Jersey dia nifidy tamin'ny volana Janoary 2020 mba hampitomboina avo roa heny ny hetra e-ranon-javatra roa, fa ny lalàna vaovao kosa dia navoakan'ny governora Phil Murphy
New Mexico dia manana hetra e-liquid misy ambaratonga roa: ambongadiny 12,5% amin'ny ranona tavoahangy, ary $ 0,50 isaky ny pod, cartridge na cigalike miaraka amina militrera 5
20% hetra antsinjarany amin'ny vokatra etona rehetra
Vola $ 0,10 isaky ny milliliter amin'ny e-ranon-javatra misy nikôtinina
Angamba ny hetra vape malaza indrindra eto amin'ny firenena dia ny hetra ambongadiny 40% an'i Pennsylania. Tany am-boalohany dia nanombana ny vokatra etona rehetra, saingy namoaka didim-pitsarana ny taona 2018 fa ny hetra dia azo ampiharina amin'ny e-ranon-javatra sy fitaovana izay misy e-ranoka ihany. Ny hetra PA PA dia nanidy orinasa kely maherin'ny 100 tao amin'ny fanjakana nandritra ny taona voalohany taorian'ny fankatoavana azy
0,05 $ isaky ny hetra milliliter amin'ny e-fluid ary $ 3,00 isaky ny hetra amin'ny e-sigara
Hetra ambongadiny 56% amin'ny fitaovana e-ranon-javatra sy prefilled
Ny hetra ambongadiny 92% amin'ny e-ranon-javatra sy fitaovana — ny hetra avo indrindra apetraky ny fanjakana rehetra
0,066 $ isaky ny haba mililiter amin'ny e-ranon-javatra misy nikôtinina
Ny fanjakana dia nandoa hetra e-ranon-javatra roa ambongadiny tamin'ny taona 2019. Manameloka ny mpividy $ 0,27 isaky ny milliliter amin'ny e-ranom-na misy na tsy misy nikôtinina-amin'ny pods sy cartridges kely noho ny 5 mL ny habeny, ary $ 0,09 isaky ny milliliter amin'ny rano ao anaty kaontenera lehibe kokoa noho ny 5 mL
0,075 $ isaky ny haba milliliter amin'ny e-ranon-javatra rehetra, misy na tsy misy nikôtinina
$ 0,05 isaky ny milliliter hetra amin'ny e-ranon-javatra amin'ny vokatra nikatona (pods, cartridges, cigalikes) ihany — misy na tsy misy nikôtinina
Haba hetra ambongadiny 15% amin'ny vokatra etona rehetra
Vape hetra manerantany
Toy ny any Etazonia, ny mpanao lalàna manerantany dia mbola tsy mahatakatra ny vokatra etona. Ireo vokatra vaovao dia toa ataon'ireo mpanao lalàna ho toy ny fandrahonana ny fidiram-bolan'ny sigara (izay tena izy ireo), ka ny filana raha matetika mametraka hetra ambony ary manantena ny tsara indrindra.
Haba hetra iraisam-pirenena
Leke 10 (0,091 $ US) isaky ny hetra mililiter amin'ny e-ranon-javatra misy nikôtinina
Manat 20 ($ 11,60 US) isaky ny hetra litatra (0,01 $ eo ho eo isaky ny milliliter) amin'ny rano rehetra
Ny hetra dia 100% amin'ny vidin'ny mialoha hetra amin'ny e-ranon-javatra misy nikôtinina. Izany dia mitovy amin'ny 50% amin'ny vidin'ny antsinjarany. Tsy mazava ny tanjon'ny hetra, satria toa voarara ny vape ao amin'ny firenena
Na dia manana hetra e-liquid amin'ny boky aza i Kroasia, dia aotra zero izany amin'izao fotoana izao
0,12 € (0,14 $ US) isaky ny hetra mililiter amin'ny rano rehetra
Ny parlemanta danoà dia nandany DKK 2,00 ($ 0,30 US) isaky ny hetra milliliter, izay hanan-kery amin'ny 2022. Ireo mpisolovava amin'ny vaping sy ny fihenan'ny fahavoazana dia miasa hanodinana ny lalàna.
Tamin'ny volana Jona 2020, nampiato ny hetrany amin'ny e-rano i Estonia nandritra ny roa taona. Ny firenena teo aloha dia nametraka € 0,20 (0,23 $ US) isaky ny haba mililiter amin'ny e-ranona rehetra
0,30 € (0,34 $ US) isaky ny hetra mililiter amin'ny rano rehetra
0,10 € (0,11 US $) isaky ny hetra mililiter amin'ny rano rehetra
HUF 20 ($ 0,07 US) isaky ny hetra mililiter amin'ny rano rehetra
Ny hetra indoneziana dia 57% amin'ny vidin'ny antsinjarany, ary toa natao ho an'ny e-ranon-javatra misy nikôtinina fotsiny ("fitrandrahana sy votoatin'ny sigara" no teny). Toa aleon'ny tompon'andraikitra ao amin'ny firenena ny mifoka sigara hatrany
Taorian'ny taona maro nanasaziana ny mpanjifa tamin'ny hetra izay nahatonga ny vaping indroa lafo noho ny fifohana sigara, ny parlemanta italiana dia nanaiky ny tahan'ny hetra vaovao sy ambany amin'ny e-fluid amin'ny faran'ny taona 2018. Ny hetra vaovao dia 80-90% ambany noho ny voalohany. Ny haba izao dia mitentina € 0,08 ($ 0,09 US) isaky ny milliliter ho an'ny e-ranon-javatra misy nikôtinina, ary € 0,04 ($ 0,05 US) ho an'ny vokatra aotrikaotika nikôtinina. Ho an'ireo vazo italiana izay misafidy ny hanao ranon-javatra manokana ho azy ireo, ny PG, VG, ary ny tsiro dia tsy hetra
Ny fitaovana sy ny e-ranon-javatra misy nikôtinina dia hetra amin'ny taha 200% amin'ny sandan'ny CIF (vidiny, fiantohana ary entana)
Na dia manana haba hetra-rano amin'ireo boky aza i Kazakhstan, dia aotra zero izao
Ny hetra kenyanina, izay nampiharina tamin'ny 2015, dia 3.000 shilling Kenya ($ 29.95 US) amin'ny fitaovana, ary 2.000 (19,97 US) amin'ny famenoana. Ny hetra dia mahatonga ny vaping ho lafo lavitra noho ny fifohana sigara (ny hetra sigara dia 0,50 $ isaky ny fonosana) - ary angamba ireo hetra ambony indrindra eto an-tany
Som 1 Kyrgyzstani Som ($ 0,014 US) isaky ny hetra mililiter amin'ny e-ranon-javatra misy nikôtinina
Ny hetra Letonianina tsy mahazatra dia mampiasa fototra roa hanisana ny vidin'ny e-ranon-javatra: misy 0,01 € (0,01 $ US) isaky ny hetra mililiter, ary hetra fanampiny (€ 0,005 isaky ny milligram) amin'ny lanjan'ny nikôtinina ampiasaina
0,90 € (1,02 US $) isaky ny hetra mililiter amin'ny rano rehetra
Denar Makedoniana 0,2 (0,0036 US $) isaky ny hetra milliliter amin'ny rano-e. Ny lalàna dia misy mamela ny fiakarana mandeha ho azy amin'ny tahan'ny hetra 1 Jolay isan-taona manomboka amin'ny 2020 ka hatramin'ny 2023
Piso 10 Philippines (0,20 $ US) isaky ny 10 millilitre (na sombiny 10 mL) amin'ny hetra-misy ekoatine misy nikôtinina (ao anatin'izany ny vokatra prefilled). Raha atao teny hafa, ny habetsaky ny mihoatra ny 10 mL fa ambanin'ny 20 mL (ohatra, 11 mL na 19 mL) dia ampangaina amin'ny taha 20 mL, sns.
0,50 PLN (0,13 $ US) isaky ny hetra mililiter amin'ny rano rehetra
0,30 € (0,34 $ US) isaky ny hetra mililiter amin'ny e-ranon-javatra misy nikôtinina
Leu Romania 0,52 (0,12 $ US) isaky ny haba mililiter amin'ny e-ranon-javatra misy nikôtinina. Misy fomba iray ahafahana manitsy ny haba isan-taona mifototra amin'ny fiakaran'ny vidin'ny mpanjifa
Ny vokatra azo esorina (toy ny cigalikes) dia hetra amin'ny 50 rubles ($ 0,81 US) isaky ny singa. Ny e-ranon-javatra misy nikôtinina dia hetra amin'ny 13 rubles $ 0,21 US) isaky ny milliliter
Ny hetra dia 100% amin'ny vidin'ny mialoha hetra amin'ny e-ranon-javatra sy fitaovana. Izany dia mitovy amin'ny 50% amin'ny vidin'ny antsinjarany.
Dinar Serba 4,32 (0,41 US $) isan-mililiter amin'ny hetra-rano rehetra
0,18 € (0,20 $ US) isaky ny hetra mililiter amin'ny e-ranon-javatra misy nikôtinina
Ny firenena voalohany nametraka hetra nasionaly vape dia ny Repoblikan'i Korea (ROK, antsoina matetika hoe Korea Atsimo any Andrefana) - tamin'ny 2011, tamin'io taona io ihany dia nanomboka nandoa hetra e-ranoka i Minnesota. Amin'izao fotoana izao ny firenena dia manana hetra efatra misaraka amin'ny e-ranon-javatra, samy natokana ho an'ny tanjona manokana fandaniana (iray ny Tahirim-pirenena momba ny fampiroboroboana ny fahasalamana. (Mitovy amin'ny Etazonia izy io, izay nananganana ny hetra sigara federaly handoavana ny programa momba ny fiantohana ara-pahasalamana ho an'ny ankizy). Ny hetra e-ranon-tsakafo Koreana Tatsimo dia mahatratra hatrany amin'ny 1,799 won ($ 1,60 US) isaky ny milliliter, ary misy ihany koa ny hetra mandany amin'ny cartridges azo sy pod 24,2 (US $ 0,02 US) isaky ny cartridges 20
Krona 2 isaky ny milliliter ($ 0,22 US) amin'ny he-caide misy nikôtinina
Sigara hafanana, Epen, Solony mifoka, Newport E sigara, E Kitapo Blitter sigara, E sigara etona ranoka,